Abdiwahab Ahmed 21/05/2014
Kooxda Barcelona ayaa Isniintii ku dhawaaqay inay tababare cusub u magacowday Luis Enrique oo dhawaan iska casilay tababarenimada kooxda Celta Vigo.
44 jirkan oo hore ugu soo ciyaaray Barcelona iyo Real Madrid ayaa shirkiisii jaraa’id ee ugu horreeyey maanta ku qabtay Barcelona, waxaanu ku nuuxnuuxsaday in uu jiri doono isbeddel uu kooxda ku sameeyo, iyadoo uu qaar ka mid ah ciyaartooyada, isla markaana uu horumarin doono dhamaan meelaha ay kooxdu ka liidato.
Enrique oo saxeexay laba sannadood oo heshiis ah oo uu macallin u ahaan doono Barca, ayaa waxa digniin adag u jeediyey ciyaartooyada, waxaanu yidhi “Ciyaartooyadu waa inay ogaadaan in aan la ogolaan karin in sannadna uu guul la’aan dhaafo Barca. Haddii aanay heerkaas gaadhsiinayn, waxa lagu samayn doonaa isbeddel. Waxaanu kooxda ku samaynaynaa dib u xoojin sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, si ay u tartami karto”.
Waxa jira warar sheegaya in ciyaartooyga magaca weyn ee Xavi Hernandez, Cesc Fabregas iyo Javier Mascheran ay ku jirayaan ciyaartooyada kooxda ka tegaya ee uu galaafan doono isbeddelka uu tababaruhu sheegay, hase yeeshee, su’aal ay warbaahintu ka weydiisay macallinka cusub, waxa ka jira warkaas ayaa waxa uu ku jawaabay “Waan aqaanaa Xavi, waana saaxiibkay, hore ayaanu isku koox u ahayn. Wax walbana waan idiinka sheegi karaa arrintiisa, waanu wada fadhiisanaynaa oo waanu wada hadlaynaa, waxaananu isla eegaynaa waxa uu doonayo iyo waxa aannu annagu rabno. Imika ballan weyn ayuu ku leeyahay koobka adduunka oo uu ku socdo.
“Ma doonayo inaan in badan ka hadlo shakhsiyaad, laakiin ciyaartooyada wanaagsan ee muhiimka ahi way joogi doonaan, qof walbana waanu dersi doonaa, go’aanno degdeg ah oo aanu hadda qaadanaynaana ma jiraan oo wakhti ayaanu haysannaa.
Waxyaabaha ugu horreeya ee laga sugayo Barca, waxaa kow ka ah in ay shaaciso in aanu Lionel Messi iib ahayn, maadaama oo uu heshiis cusub saxeexay Isniintii, waxaanu Enrique ku rajo weyn yahay in uu la soo noqon doono qaab-ciyaareedkiisii hore.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan ciyaartoyga adduunka ugu wanaagsan ku haysto kooxdayda, kooxduna sidayda oo kale ayay u arkaan. Hadda ayuu dib u cusboonaysiiyey heshiiska taasina waxay muujinaysaa in isaguna ku faraxsan yahay halkan. Waa laga yaabaa in qaab-ciyaareedka Leo aanu ahayn mid u heer sarreeya sidii hore, laakiin waa ninka koowaad.
“Waxa uu noo keenaa wax ka badan goolal, muhiim ayuu u yahay koox ahaan, waxaanannu rabnaa in uu ahaado sida ugu wanaagsan.
Neymar waxa uu Barca ku biiray sannadkii hore isaga oo lacag badan kaga soo wareegay kooxda reer Brazil ee Santos, waxaanu tababare Enrique aaminsan yahay in uu yahay ciyaartooyada mustaqbalka ku leh kooxda ee sii joogaya.
“Dabcan waa mid ka mid ah ciyaartooyada muhiimka u ah kooxda, lacag badan ayay kooxdu ku bixisay inaan halkan ku haystana waan ku faraxsanahay”. Ayuu yidhi.
Tababare Enrique waxa uu tibaaxay in shaqada loo dhiibay aan ahayn kaliya inuu layliyo kooxda, laakiin ay tahay inuu noqdo hoggaamiye, taas oo ah inuu dhiirigeliyo, maamulo kooxda, khiddad iyo hannaan ciyaareedna ku daro.
Barcelona kubaddeeda waxa inta badan lagu dhalleeceeyaa in aanay weerar badan samaynin, laakiin kubad qurux badan oo dadka soo jiidata oo isku dhiib-dhiib ku dhisan ay ciyaarto, hase yeeshee, tababare Enrique waxa uu sheegay in hadda ay kooxdiisu si fiican u weerari doonto kooxaha ka soo horjeeda.
“Waanu weerari doonaa, kubad soo jiidasho lehna ciyaari doonaa, taageereyaashayada dunida oo dhanna waannu maaweelin doonaa .
“Barca waxay leedahay fikir fiican oo ah kubad soo jiidasho leh, laakiin waa in aanu difaacanno oo aanu yool lahaanno, si adagna aannu u shaqayno. Qaabka ciyaaristu sidiisa ayuu ahaan doonaa maadaama uu sannado badan sidaas soo ahaa, laakiin waa in aannu horumarinno fikirkaas oo aanu ciyaartooyada dhisno”. Ayuu yidhi.
Cristiano Ronaldo Oo Magacaabay Liiska Xiddigaha Da’yarta Ugu Fiican Adduunka
PSG 2-0 Olympique Lyon – All Goals & Highlights
Zidane Oo U Dabbaal-degaya Sannad-guuradii 1aad Ee Tababarenimadiisa
Buffon Oo ogolaaday inuu heshiiska u kordhiyo Kooxda Juventus
Kooxda Chelsea Oo Calaamadaysatay Bedelka Andre Schurrle